रिलेशनशिप मजबुत बनाउने ४ टिप्स : बढ्नेछ प्रेम, टाढा जानेछन् विवाद | Kendrabindu Nepal Online News
रिलेशनशिप मजबुत बनाउने ४ टिप्स : बढ्नेछ प्रेम, टाढा जानेछन् विवाद
२ भाद्र २०७७, मंगलवार १४:०४
१. एक अर्कालाई सम्मान गर्नुहोस्
कुनै पनि सम्बन्धलाई बलियो राख्नका लागि, एक अर्काको सम्मान गर्नु धेरै महत्वपूर्ण छ । सम्बन्धमा पनि, एक अर्काको सम्मान गर्दा सम्बन्ध बलियो हुन्छ र प्रेम बढ्छ । सम्बन्धमा एक अर्कालाई सम्मान नगर्दा सम्बन्ध टुट्न सक्छ । यदि तपाईं आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहनु हुन्छ भने, एक अर्काको आदर गर्नुहोस् ।
२. कुराकानी गर्नुहोस्
सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि कुराकानी गरिरहनु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै चोटि झगडा भएपछि हामी कुरा गर्न छोड्छौं, तर कुराकानी बन्द गर्नाले अझै झगडा बढ्न सक्छ । त्यसैले कुराकानीमार्फत नै झगडा समाधान गर्नुपर्छ । एक अर्कासँग कुराकानी गर्न कहिल्यै नछाड्नुहोस् ।
३. भावनाहरुको मूल्याङ्कन
सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि, एक अर्काको भावनाको मूल्यांकन गर्न धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । एक अर्काको भावनाको कदर नगर्नाले, सम्बन्धमा दूरी बढ्न थाल्छ । पार्टनरका कुरारूलाई महत्व दिँदा सम्बन्ध बलियो हुन्छ ।
४. गल्ती स्वीकार्नुहोस्
गल्ती जो कोहीबाट पनि हुन सक्छ । सम्बन्धमा पनि धेरैपटक केही गल्तीहरू हुन्छन्, जसको कारणले पार्टनरसँग दुरी बढ्न थाल्छ । सम्बन्ध बलियो बनाउन एक व्यक्तिले उसको गल्ती स्वीकार्नु पर्दछ । गल्ती स्वीकार नगर्नाले मामला झन् बढी खराब बनाउँछ ।
Prevनेपाली युवाको ‘इन्ट्रेस्ट’ ले चीन चिन्तित : गोर्खा समुदाय किन इण्डियन आर्मीमा जान चाहन्छन् ?
कोरोनाले छोएन बीमा कम्पनीहरुलाई : यस्तो छ प्रगतिNext